Ọnụ Ọgụgụ 24 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ọnụ Ọgụgụ 24:1-25
24 Mgbe Belam hụrụ na ọ dị mma n’anya Jehova ịgọzi Izrel, o sighị n’ebe ahụ pụọ dị ka ọ na-emebu+ ịga chọta mgbaàmà ihe ọjọọ,+ kama o chere ihu n’ala ịkpa. 2 Mgbe Belam lepụrụ anya hụ ka Izrel bi n’ụlọikwuu n’ebo n’ebo,+ mmụọ Chineke dakwasịrị ya.+ 3 O wee jiri ilu malite ikwu,+ sị: “Nke a bụ ihe Belam nwa Biọ kwuru,Ihe dimkpa a na-ekechighị anya ya ekechi+ kwuru, 4 Ihe onye na-anụ okwu Chineke kwuru,+Onye hụrụ ọhụụ nke Onye Pụrụ Ime Ihe Niile,+Onye anya ya na-emechighị emechi mgbe ọ na-ada:+ 5 Lee ka ụlọikwuu gị si maa mma, Jekọb, ee, ebe obibi gị, Izrel!+ 6 Dị ka ndagwurugwu, ọ gbatịpụrụ ruo ebe dị anya,+Dị ka ubi ndị dị n’akụkụ osimiri.+Dị ka ahịhịa alo nke Jehova kụrụ,Dị ka osisi sida ndị dị n’akụkụ mmiri.+ 7 Mmiri si na bọket ya abụọ e ji akpụkpọ anụ mee na-atapụsị,Mkpụrụ ya dịkwa n’akụkụ ọtụtụ mmiri.+Eze+ ya ga-akakwa Egag+ ukwuu,A ga-ebulikwa alaeze ya elu.+ 8 Chineke si n’Ijipt na-akpọpụta ya;Ọ na-awụ ọsọ dị ka atụ́.+Ọ ga-eripịa mba dị iche iche, bụ́ ndị na-emegbu ya,+Ọ ga-atapịa+ ọkpụkpụ ha, ọ ga-eji akụ́ ya gbarie ha.+ 9 O huuru ehuru, ọ makpu dị ka ọdụm,Dịkwa ka ọdụm, ònye ga-anwa anwa kpọtee ya?+Ndị na-agọzi gị bụ ndị a gọziri agọzi,+Ndị na-abụ gị ọnụ bụ ndị a bụrụ ọnụ.”+ 10 Belak wee weso Belam iwe dị ọkụ wee kụọ aka,+ Belak wee gaa n’ihu ịsị Belam: “Ọ bụ ka ị bụọ ndị iro m ọnụ+ mere m ji kpọọ gị, ma, lee! ị gọziwo ha gabiga ókè ugboro atọ a. 11 Ugbu a, gbara lawa n’obodo gị. Ekwuru m na aghaghị m ịkwanyere gị ùgwù,+ ma, lee! Jehova egbochiwo gị inweta nkwanye ùgwù.” 12 Belam wee sị Belak: “Ọ̀ bụ na mụ asịghị ndị ozi gị i zipụrụ ka ha bịakwute m, 13 ‘Ọ bụrụ na Belak enye m ụlọ ya nke ọlaọcha na ọlaedo juru, agaghị m enwe ike ịda iwu Jehova wee mee ihe ọma ma ọ bụ ihe ọjọọ site n’obi m. Ọ bụ ihe ọ bụla Jehova ga-agwa m ka m ga-ekwu’?+ 14 Lee, alawala m ka m lakwuru ndị m. Bịa ka m gwa gị+ ihe ndị a ga-emesị mee ndị gị ná ngwụsị ụbọchị ndị a.”+ 15 O wee jiri ilu malite ikwu,+ sị:“Nke a bụ ihe Belam nwa Biọ kwuru,Ihe dimkpa a na-ekechighị anya ya ekechi+ kwuru, 16 Ihe onye na-anụ okwu Chineke kwuru,+Onye nwe ihe ọmụma nke Onye Kasị Elu—Ọ hụrụ ọhụụ+ nke Onye Pụrụ Ime Ihe Niile,Anya ya emechighị emechi mgbe ọ na-ada:+ 17 M ga-ahụ ya,+ ma ọ bụghị ugbu a;M ga-ahụ ya, ma ọ bụghị n’ebe dị nso.Kpakpando+ ga-esi na Jekọb pụta,Mkpanaka eze ga-esikwa n’Izrel pụta.+Ọ ga-etiwa agba ntị abụọ nke Moab,+Tiwaakwa okpokoro isi nke ụmụ mbibi niile. 18 Idọm ga-aghọ ihe nketa,+Ee, Sia+ ga-aghọkwa ihe nketa nke ndị iro ya,+Mgbe Izrel na-egosi obi ike ya. 19 Otu onye ga-esi na Jekọb pụta wee na-enwe mmeri,+Ọ ga-ebibi onye ọ bụla fọdụrụ n’obodo ahụ.”+ 20 Mgbe ọ hụrụ Amalek, ọ gara n’ihu iji ilu kwuo, sị:+“Amalek bụ mba mbụ n’ime mba dị iche iche,+Ma e mesịa, ikpeazụ ya ga-abụ ịla n’iyi.”+ 21 Mgbe ọ hụrụ ndị Kenaịt,+ ọ gara n’ihu iji ilu kwuo, sị:“Ebe obibi gị na-adịgide adịgide, e wuru ebe obibi gị n’elu nkume dị elu. 22 Ma a ga-enwe onye ga-agba Keyin+ ọkụ.Gịnị ka ọ fọdụrụ Asiria ewee dọrọ gị n’agha?”+ 23 O wee gaa n’ihu iji ilu kwuo, sị:“Ewoo! Ònye ga-alanahụ mgbe Chineke ga-eme ya?+ 24 Ụgbọ mmiri ga-esi n’ụsọ osimiri Kitim+ bịa,Ha ga-emekpa Asiria ahụ́,+Ha ga-emekpakwa Iba ahụ́.Ma ya onwe ya ga-emesị laa n’iyi.” 25 E mesịa, Belam biliri lawa.+ Belak lawakwara.
Ọnụ Ọgụgụ 24